Training ကို ကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုးရှား ၊ စာချုပ်ကိစ္စ ကြန့်ကြာနေသူများ ၊ ဒါဘီ ကို ဝယ်ချင်တဲ့ သူဌေးတို့ နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
Training ကို ကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုးရှား ၊ စာချုပ်ကိစ္စ ကြန့်ကြာနေသူများ ၊ ဒါဘီ ကို ဝယ်ချင်တဲ့ သူဌေးတို့ နဲ့ . . . ယနေ့အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
October 26, 2021 - by Editor
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား ဟာ ဒီကနေ့ ပြုလုပ် ခဲံတဲ့ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် ကို လာရောက် ကြီးကြပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်းရဲ့ ဂန္ထဝင် နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ဟာလည်း လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို ရောက်လာ ခဲ့ပြီး ဆိုးရှား နဲ့ အသင်းသားတွေ ကို အားပေး စကား ပြောဆို သွားခဲ့တယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
လက်ရှိ မှာ ရှုံးပွဲတွေ ဆက်ပြီး ဖိအားတွေ ရှိနေပေမယ့် ယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့ဟာ ဆိုးရှား ကို ထုတ်ပယ်ဖို့ အလောတကြီး မစဉ်းစားထားဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ လာမယ့် စနေနေ့ မှာ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဆိုးရှား ဟာ စပါး ၊ အတ္တလန်တာ နဲ့ မန်စီးတီး တို့နဲ့ ကစားမယ့် ပွဲတွေ အထိ နည်းပြ အဖြစ် ဆက်ရှိနေဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲမှာ ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူ ဂျိမ်းစ် မေနာ ဟာ နိုဝင်ဘာထဲမှာ ကစားမယ့် နိုင်ငံ တကာ ရက်သတ္တပတ် ပြီးလောက်တဲ့ အထိ အနားယူရ တော့မယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ပေါ့ဘာ ရဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ဖျက်ထုတ်မှုကို ခံခဲ့ ရတဲ့ နာဘီ ကီတာ ကတော့ စုတ်ပြဲ ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်သာ ရရှိ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အခြား လီဗာပူး ကစားသမားတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဖာဘင်ဟို နဲ့ သီယာဂို အယ်ကန်ထရာ တို့ကတော့ ပြန်လည် လေ့ကျင့် နိုင်ဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
PSG အသင်း ကတော့ အီတလီ ကွင်းလယ်လူ မာကို ဗာရက်တီ ဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် ၄ ပတ် အနားယူရမယ် လို့ ထုတ်ပြန် သွားခဲ့သလို လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းနိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ ခံစစ်မှူး ရာမိုစ့် ဘယ်နေ့ ကစားနိုင်မယ် ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ပြန် မသွားခဲ့ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ရီးရဲ နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်း ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရာထူးကို စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။ အင်တာ နဲ့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြဟောင်း ကွန်တီ ကို ယူနိုက်တက် ဘုတ်အဖွဲ့က စဉ်းစား ထားပေမယ့် လတ်တလော ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ နောက်ခံလူ ခရစ်ရှန်ဆန် တို့ရဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ဟာ ရပ်တန့် ထားတာ ၂ လခန့် ရှိပြီလို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ရာသီ အကုန်မှာ စာချုပ်ပြည့် မယ့် ဒိန်းမတ် နောက်ခံလူကို ဘာစီလိုနာ က စိတ်ဝင်စား နေပြီး ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း မတိုးဖြစ်သေးပါက ဇန်နဝါရီ မှာ ဘယ် အသင်းနဲ့ မဆို အကြို သဘောတူညီမှု ရယူ ထားနိုင်တော့မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ကတော့ ၂၀၂၃ နွေရာသီ မှာ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်မယ့် တောင်ပံ ကစားသမား ကိုးမန်း ကို ဒေးဗစ် အလာဘာ တုန်းကလိုမျိုး အလွတ် နဲ့ လက်မလွှတ် စေရဖို့ အတွက် ဒီရာသီ အကုန်မှာ ထုတ်ရောင်း သွားဖွယ် ရှိနေပြီး ဈေးချို နိုင်တာကြောင့် ဥရောပ အသင်းတွေ အပြိုင် ကြိုးစား ကြဖွယ် ရှိတယ်လို့ သုံးသပ် ထားကြပါတယ် ။
စကော့တလန် နဲ့ ရိန်းဂျားစ့် အသင်းတို့ရဲ့ ဂန္ထဝင် နည်းပြဟောင်း ဝေါ်လ်တာ စမစ် ဟာ အသက် ၇၃ နှစ် အရွယ် မှာ ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပြီလု့ိ သိရပါတယ် ။ ဝေါ်လ်တာ စမစ် ရဲ့ ကွယ်လွန်မှု ကို စကော့သားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် ၊ ဆာကင်နီ ဒဲဂလစ်ရှ် တို့ အပါအဝင် နာမည်ကျော် တွေ က ဂုဏ်ပြု နှုတ်ဆက် ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦး ဖြစ်တဲ့ ခရစ် ကတ်ချ်နာ ဟာ ချန်ပီယံရှစ် ကလပ် ဒါဘီ ကောင်တီ အသင်းကို ဝယ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် နဲ့ မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမားဟောင်း ရှောင် ရိုက်ဖိလစ် ကတော့ ရာဟင်း စတာလင် အနေနဲ့ စီးတီး နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးသင့်ပြီး အစ်တီဟတ် ကို စွန့်ခွာဖို့ မစိတ်ကူးသင့်ကြောင်း အကြံပြု တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဝါရင့် ကစားသမား ဆာဂျီ ရောဘတ်တို တို့ရဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စကတော့ ညှိနှိုင်းမှု အဆင့် မှာသာ ရှိနေတယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ် ။
Previous Article ယူနိုက်တက် ကစားသမား ၄ ဦးကို ငြိမ်သက်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အီဗရာဟီမာကိုနာတေးကို အထူးချီးကျူးလိုက်တဲ့ ပက်လင်ဒါ
Next Article ဆိုးရှားသာ ရာသီကုန်ထိ ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင် မန်ယူနိုက်တက်တို့ ရပ်တည်နိုင်မယ့် အဆင့်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ဒါရင်းဘန့်